Chii chinonzi Ethereum 2.0 uye nei ichikosha - Cazoo
Chii chinonzi Ethereum 2.0 uye nei ichikosha
musha » musha » Chii chinonzi Ethereum 2.0 uye nei ichikosha
Tag: ethereum, Ethereum 2.0, Ethereum Virtual Mashini (EVM), Ethereum WebAssembly (EWASM), Uchapupu hweShamba, scalability, Vitalik Buterin
Nguva yekuverenga: 6 minuti
Kana muna 2015 Ethereum apinda mumambure makuru, yakamutsa kufarira uye kunakidzwa kwechikamu chakakura chenyika yekuvandudza, uyezve zvakare varimari. Zvavaitarisira zvaifanira kurerukirwa sekukanganisika uye nyaya dzekuchengetedza zvakatanga kuratidza muchirongwa. Kunatsiridzwa kwakaitwa kukodhi, uye kusimudzira hakuna kumbomira, asi zvakabva zvave pachena kune wese munhu kuti Ethereum yaida kuzadzikiswa kuzokwikwidza mune ramangwana. kuti ive inopedzwa mune ramangwana: saka Ethereum 2.0 yakazvarwa, iine "kodhi" yayo zita Serenity.
Mhoro kune wese akanaka uye akashata. Kana ino inguva yako yekutanga kuuya pano, unogamuchirwa.
Pano, kuCazoo, isu tinotsanangura zvinonyanya kufadza mapurojekiti epasi guru re cryptocurrencies, ongorora mitengo uye maficha, tsvaga izvo zvekutanga zvekutengesa uye ita epamberi tekinoroji kuongororwa pane blockchains. Muchidimbu, pane chimwe chinhu pane zvese zvido.
Cazoo ibhuku, diary, Moleskine yemanotsi ayo anondibvumidza kuti ndibate mumusoro kutsvagurudza kwangu. Ndakazviita pawebhu, pachena, nekuti izvo zvandakadzidza ini ndichangodzidza pawebhu, uye pawebhu ndinozvidzorera netariro kuti iwe unogona kuzvishandisa zvakare. Kana zvikadaro, ndinofara nazvo.
Handei tione kuti chii Ethereum 2.0 uye tinzwe zvese zvinonakidza ruzivo.
Iwe wave kutoda kutenga Ethereum? Kana iwe ukaita izvi paBinance, shandisa ichi chinongedzo chinongedzo: iwe une yakanyanya kutapudza inowanikwa, 20%, pane ese makomisheni, zvachose!
Tsananguro pfupi yeEthereum 2.0
Matambudziko eEthereum, ayo Ethereum 2.0 anoda kugadzirisa
Chii chinozochinja neEthereum 2.0?
Phase 0: Uchapupu hweStake uye Beacon Chain
Phase 2: Kubatana
Chikamu 3: EWASM
Mhedzisiro pamutengo weETH pamwe neiyo Ethereum 2.0 yekuvandudza
Ethereum 2.0 Kugadzikana, sekutsanangurwa kwaPreston Van Loon, ndeye blockchain yakasiyana kupfuura yatinoziva Ethereum yazvino. Iyo pachayo iri Ethereum kusimudzira, iyo zvakadaro hazvizoda forogo rakaomarara reiyo cheni yekutanga.
Preston Van Loon - Prysmatic Labs Co-muvambi, Ethereum Protocol Develope
Iwe unozokwanisa sei kuwana Ethereum 2.0? Dhipoziti ichaitwa mari yese kamwe yeEther kubva kune yekare kuenda kuketani nyowani kuburikidza ne Smart Zvibvumirano. Ichi chichava nzira-imwe yekutengeserana, mushure mezvo kushandiswa kwenhaka Ethereum system kunofanira kumira.
Sezvandambotaura pakutanga, Ethereum yatove nekumwe kugadzirisa kwakaitisa kuti ive yakamanikana uye iwedzere kutyisa, chaizvo mukutarisira kuburitswa kweEthereum 2.0. Shanduko idzi dzine mazita anoshamisa: Homestead Kurume 2016, Metropolis Byzantium Gumiguru 2017, Metropolis Constantinople Kukadzi 2019, uye Istanbul Zvita 2019.
Isu takanzwisisa chikonzero chiri shure kweshanduko: dhizaini yazvino ine zvakawanda, zvakawandisa zvakawanda. Iyo algorithm Uchapupu hwebasa uye zvimwe zvikamu zveapurani hazvina kumbobvira zvatarisana neanodikanwa ekuvandudza.
Mamwe ematambudziko makuru ndeaya:
Kukwanisika: ichizivikanwa chokwadi kuti iyo kombiyuta yenyika (iyo huru yekutarisa kweButerin uye yake Ethereum yakasikwa) inononoka. Parizvino, iyo protocol inoremerwa nezvose zvakadzvanywa kunyorera (DAPPS) uye Smart Zvibvumirano zvinomhanya kuburikidza nazvo. Dzimwe gadziridzo dzakaitwa kumberi uku, asi zvakave pachena kuti Humbowo hweBasa blockchain yaisakwanisa kubata nekudiwa.
chibatisoIko hakuna kumbove nekukosha kwakakomba kwekuchengetedzeka muEthereum, asi kumwe kuvandudza kunozivikanwa kubatsira hutano hwesisitimu yese. Ichi chinangwa cheEthereum 2.0, inovavarira kugadzira chikuva chakasimba.
Mushandisi mutsva: chimwe chezvinhu zvikuru zvitsva zveEthereum kwaive kuburitswa kwemuchina chaiwo. Ichi chikamu chinomhanyisa zvibvumirano zvakangwara uye inogadzira iyo protocol komputa yepasirese. Dambudziko nderekuti chikamu ichi zvakare chinononoka. Iri idambudziko rakakura nekuti kwese kutengeserana muEthereum kunovandudza mamiriro epasirese. Parizvino, iyo EVM (Ethereum Virtual Machine) iri bhodhoro mune ino sisitimu.
Kana matambudziko eEthereum 1.0 angodomwa, tinogona kutarisa kuti ndedzipi gadziriso ichaunzwa naEthereum 2.0. Ramba uchifunga kuti izvi zvigadziriso zviri padanho repamberi rekuronga, iko kusimudzira chaiko, kunyangwe chikamu chakatotanga, kuchiri kuuya.
Uchapupu hweShamba: Proof-of-Stake kubvumirana algorithm ndiyo shanduko hombe kuuya naEthereum 2.0. Iyi nzira inoshandisa danda panzvimbo yemagetsi sechiyero chechokwadi.
MuChipupuriro cheBasa blockchain, ketani inehashi simba iyo yepamusoro iri nani.
MuChipupuriro cheStake blockchain, cheni ine zviwanikwa zvakanyanya pangozi ndiyo yakanakisa.
Uyezve, vanogonesa vanova sosi nyowani uye zvakare block vaparidzi. Ava vashandisi vakasunga zvisirinani 32 ETH. Aya masosi staking anotendera anoshanda kuti apinze rotari kuti isarudzwe semugadziri webhokisi rinotevera uye nokudaro kukwanisa kutora mibairo yake. Kana anoshanda akaenda kunze kwenyika kana kuita nekusatendeseka pachinenge chiri chikamu chinoshanda che network, zvimwe kana zvese zveEther zvinoshandiswa kuva zvinosimbisa zvinotorwa kubva kwazviri.
shardingImwe shanduko huru musystem iko kushandiswa kwemativi emaketani anozivikanwa se shard. Pakutanga ndakati kunonoka kwekutengeserana, kuzara kwenetiweki, nderimwe rematambudziko makuru ehurongwa hwazvino. Mukuvakwa kwayo kuripo zvinoita kunge pasina mhinduro chaiyo. Nechikonzero ichi, kugadzira akaparadzaniswa madiki macheni (shards) ayo anogona kubata nematanho ega ega ipfungwa yakanakisa uye nekukosha kwekuvandudza. Polkadot anga achiita izvi kubva paakazvarwa.
Chii chinonzi Ethereum 2.0 RoadMap
SaEthereum 1.0, Ethereum 2.0 ichavhurwawo muzvikamu zvina:
Phase 0: kuvhurwa kweiyo nyowani proof-ye-dhata system (inozivikanwa seCasper) uye kusimudzira kwepakati Ethereum 2.0 blockchain (inonzi Beacon Chain);
Phase 1: kuyera kugona kweEthereum 2.0 nekukamura network kuita makumi matanhatu nematanhatu blockchains (anozivikanwa semaketani ane shard) ayo anotendera netiweki kugadzirisa zvimwe zviitiko;
Phase 2: Gonesa kugona kwezvibvumirano zvakangwara izvo zvinobvumidza dApp kumhanyisa paEthereum 2.0, uye voita zambuko pakati peiyo yekutanga Ethereum network uye Ethereum 2.0; uye pakupedzisira
Phase 3: Sekureva kwaEthereum muvambi Vitalik Buterin, chikamu ichi chichava "kunyanya kuita zvimwe zvinhu zvatinoda kuwedzera kana tatanga", asi zvichanyatso gamuchira shanduko yeEVM (Ethereum Virtual Machine).
Zvichiri kurongerwa kuburitswa mu2020, iyo Beacon Chain chiratidzo cheStake network yakarongwa kushanda pamwe naEthereum 1.0. Ichazovhurwa chete kana 524.288 muEther yakaiswa, uye angangoita 16.384 node akanyoreswa seanoshanda. Pakutanga, iyo Beacon Chain haizove shanduko hombe kune vazhinji vashandisi. Iyi samambure haigamuchire Dapps uye haizomhanyisa smart zvibvumirano. Basa rayo rekutanga richava senge rejista yeanoshanda uye mugove wavo mukati mumbure.
Ichi chikamu chakarongerwa kwegore rimwe mushure mekupedzwa kweChikamu 0. Muchikamu chino, iyo imwechete Chain yeEthereum 1.0 ichatemwa kuita zvidimbu zvidiki zvinonzi shards. Iyo inotarisirwa nhamba ye shards iri makumi matanhatu mune yekutanga kuvhurwa. Ichi chikamu chakanyanya kusimba: icho chinobvumidza kunongedza kutengeserana mune yakakosha sub-ngetani uye tendera yakafanana data kugadzirisa.
Padanho rino Chiratidzo cheKushanda chekare chinofanirwa kuverengerwa munetiweki nyowani seimwe yeiyo shards, imwe yemakesi-emaketani. Nekudaro, nechikamu ichi chero nguva hakuzove nekudikanwa kwekuendesa marekodhi kubva kune imwe cheni kuenda kune imwe. Nhoroondo yekutengesa yeketani yePoW ichagara sechikamu cheEthereum 2.0. Izvi zvinofanirwa kuitika nguva pfupi yapfuura Chikamu che1.
Muchikamu chino, nguva pfupi mushure mekunge maviri Ethereum 1.0 uye Ethereum 2.0 maketani abatanidzwa, iyo Ethereum Virtual Machine ichatsiviwa. Iko hakuna zvakawanda zvakawanda zvine chekuita nechikamu ichi, asi iyo nyowani chaiyo muchina uchadaidzwa kuti Ethereum WebAssembly (EWASM), nekuti ichave yakavakirwa pamusangano webhu fomati.
Nedzidzo iyi, Dapp inomiririra uye smart contract kuuraya ichave iri mukutenderera kuzere muEthereum 2.0. Izvi zvinoreva kuti isu tichakwanisa kutonga iyo yekupedzisa yakapera chete kana Ethereum asati apedza chikamu ichi.
Mugwagwa wakareba uye unotenderera, asi kugona kweiyo itsva Ethereum 2.0 kwakaita kuti mukanwa muve nemvura yevakawanda. Nyika ichachinja. Ichi chiitiko chikuru chisingazobatsire vashandisi veEthereum chete, asi zvakare chichafambisa indasitiri yacho izere mune ramangwana.
Vazhinji vanotenda kuti Ethereum inokwanisa kubata uye kupfuura Bitcoin. Ndinofunga saizvozvo. Izvi zvaizoreva kuwedzera mukukosha kwayo ka makumi maviri nguva nenzira:
TENGA ETHEREUM PAMUSORO PABHINIKI, Uine 20% DZIDZO PAMAKOMISHINI
Unoda kunzwisisa zvirinani mashandisiro anoita sei?
Iwe unogona zvakare kuverenga pano sei ita zvakanyanya kuderedzwa paBinance.
Nyaya yapfuuraChii chinonzi Ethereum?
Nyaya inoteveraNFT Chirevo: 2021 igore rekukura kukuru